Honda Fit 2014 (#594245) ကို Hlaing မြို့နယ်တွင်ရောင်းရန်ရှိ | CarsDB
2018-01-26 13:12:42 +0630
HONDA FIT GK3 2014 MODEL 1.3G F PACKAGE ,Black COLOUR 1300CC TV & BACK CAMERA PUSH START SMART KEY. STREERING VOLUME CONTROL SMART STOP,Aircon Digital. Eco Mode , VSC Mode , Back Wiper TINTED MIRROR CLEAN ENGINE GOOD INTERIOR & EXTERIOR DIRECT SALE BY OWNER PRICE NEGOTIATE. YGN LICENCE, နောက်ဆုံးနံပါတ်ရမည် ၀ယ်သူအမည်ပေါက်HP စနစ်ဖြင့် အရစ်ကျရောင်းပေးပါသည်။ ***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
Lot Number: #594245